बुवा बितेपछि आमा अरुसगै पोइला गइन, एक्लै घर सम्हाल्दै, रुदै भोकभोकै (हेर्नुस् भिडियो ) – Eps Sathi
January 21, 2022 332
बुवाको हात समातेर हिड्ने बेलामा बुवाले संसार छाडे र बुवा बितेको केही समयमानै आमा अरुसगै पोइला गइन। पोइल गएकि आमा छोराछोरीलाई भेट्न आइन, भेट्न मात्रै आइनन आमाले एक सय पचास रुपैया दिएर पनि गइन। कस्ले देख्छ यी छोराछोरीको आँसु आखिर जस्ले देख्नु पर्ने उसैले छोडेर गयो।
जन्म दिने आफ्नै आमाले समेत छाडेर गएपछि आखिर कसले देला र साहारा। बुवा अत्याधिक म दिरा पिउने भएसगै त्यसैको कारण अन्तत म र्न पुगे। कलिलै उमेरमा नै उनले ठूला मान्छेको जस्तो घर व्यवाहार सम्हाल्नुपर्ने बाध्यता आइपर्यो। रहरले होइन बाध्यताले नै उनलाई बाँध्न पुग्यो।
उमेरको हिसाबमा पनि एकदमै कलिलि नानू यसरी यस्तो जाडोको समयमा पनि बिहान सवेरै उठेर घरको खाना पकाउने भाडा माझ्ने घर पुछ्ने देखि सम्पुर्ण काम आफै गर्छिन्। कोहि नभएकाको भगवान हुन्छन भन्थे तर यहाँ किन त्यसो भएन? यति साना कलिला बालखहरुलाई किन यति ठूलो पिडा? भगवान उनिहरुमाथि दया गर। कृपा गर। यो दुखबाट उनिहरुलाई निकालिदेउ।
हे भगवान् आखिर तिमिले कस्तो कर्म दियौ। ती स-साना नानिले कसरी कहाबाट अन्न पानी जुटाउदा हुन, कहिलेकाही अन्न नहुदा भोकै बस्ने गरेको उनिहरु बताउँछन्। उनिहरुको सहारा अब कोहि छैनन। उनिहरुलाई हेर्ने अब भगवान बाहेक कोहि पनि रहेनन।
आमा बुवाको माया जब सबैभन्दा धेरै आवश्यक पर्ने त्यो बाल्यकालमा नै दुबैले छोडेर गएपछि एक्लै भएका रुपेश र दुर्गिको त्यो संघर्षपुर्ण भिडियो सामाग्री तपाईहरु समक्ष पेश गर्दैछौ। उक्त व्यथा पछिल्लो समय भाइरल भएकि बिनिता कुमालसग मिल्दोजुल्दो छ।
Prevहाइपर फण्ड ठगि योजना ‘पोन्जी’ को नयाँ स्वरुप
Nextउत्तर कोरियाले गत बर्ष मात्रै ह्याकिङ गरि चोर्यो ४ सय मिलियन डलर